Andro iraisam-pirenena anoherana ny famehezam-bava eto amin’ny Aterineto | 12.03.2010 – Malag@sy Miray
Journée mondiale contre la cyber-censure >> |
Nandritra ny volana maromaro lasa izao dia niova endrika tanteraka ny « blaogasyfera » [fitambaran’ireo mpampiasa Aterineto malagasy] izay mifanandrify indrindra amin’ny olana ara-politika any an-tanindrazana. Tsy hamaritra izany endrika vaovao izany aho satria tsy manana traikefa hanao izany sady mila fotoana lavalava kokoa raha tiana hamaritra izany endrika mbola eo an-dalam-piovana izany. Tsy hataoko koa ny handrohy izany fiovana izany amin’ny fiovana ara-politika any Madagasikara. Na dia izany aza dia zavatra roa no marihiko, dia ny fitombon’ireo malagasy mampiasa sy ireo vohikala mpivoy an’i Madagasikara eto anivon’ny Aterineto [blaogy, kianja iadian-kevitra, twitter sns.] sy ny fiovan’ireo lohahevitra izay resahina.
Heveriko fa raha maniry handinika izany fivelaran’ny blaogasyfera izany dia mila fototra arahin’isa sy fampitahana amin’ireo blogaosfera hafa. Raha ny momba ny fivoatr’ireo lohahevitra izay dinihina indray dia toa tsikaritro ho miompana bebe kokoa amin’izay iainan’ny mponina any an-tanindrazana, ka zary tavelavela ireo lohahevitra sasany zary heverina ho toy ny « maivamaivana ».
Eo am-piatrehana izany firongatry ny isan’ny blaogy sy twitter mikasika an’i Madagasikara izany, izay sady tsy voavakiko daholo no tsy ankafiziko arak’izay tokony ho izy angamba, dia miezaka aho ny mampihatra ny tenin’i Voltaire « Tsy mitovy hevitra aminsquowhawydizay ambaranao aho, anefa hiady hatraminsquowhawydny fara-fofonsquowhawydaiko aho mba azahoanao manambara izany teninao izany » Eny, teny manohana ny fahalalaham-pitenenana aho… eto anivon’ny Aterineto koa.
Raha ny mikasika izany fahalalaham-pitenenana anivon’ny Aterineto izany indray no heverina any Madagasikara dia mitohana hatrany amin’ny tsy fahampian’ny fitoavana toy izay iainan’ireo firenena andalam-pandrosoana hafa ny mponina any an-tanindrazana. Olana hafa koa ny fifanalaviran’tany izay sakantsakana hafa hoan’ireo izay te-hanambara ny heviny. Amin’ity lafiny iray manokana ity dia mahavelom-panatenana ny Aterineto ho fitaovana afaka hamitrana ireo olom-boafidy sy ny vahoaka izay soloiny tena na koa ireo mponina any amin’ny faritra samihafa amin’ny alalan’ny fifankahalalana bebe kokoa. Indrisy anefa fa mbola ho lava ny lalana satria ankehitriny dia fampielezankevitra sy fifampihatsiana no ankamroany tsikaritra. Mbola latsaky ny 5% ny tahan’ny fampiasana Aterineto anivon’ny firaha-monina any Madagasikara, tsy afaka miresaka zo isika izany fa mbola tombontsoa hoan’ny ireeo vitsy an’isa manana fahefa-mividy izany ankehitriny. Faniriako anefa raha ireo tsy fahatanterahana ireo dia tsy atao kendry tohana hamehezam-bava ny Aterineto fa vao mainka hanosika ireo tompon’andraikitra mba hanamóra ny fampisana ny Aterineto amin’ny alalan’ny fanatsarana ny tolotra sy ny fampihenana ny vidiny.
Na dia lalaiko fatratra aza izany fahalalaham-pitenenana izany sady faniriako raha mba tanteraka any Madagasikara koa izany. Tsy azo odian-tsy hita fa any amintsika izay mbola latsaky ny 20% ny tahan’ireo trano manana rano JIRAMA, dia tsapako fa maivana ny fikatsahana izany zo izany raha mihoatra amin’ny fikatsahana ireo zo hafa toy ny zo ho arovana na ny zo ho tsaboana.
Ny fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana mpiaro ireo mpanao gazety sady mpivoy ny fahalaham-pitenenana « Reporters sans frontières » no mivoy ity Andro iraisam-pirenena anoherana ny famehezam-bava eto amin’ny Aterineto ity izay ankalazaina nanomboka tamin’ny 12 Martsa 2008.
Par Tomavana 3 Commentaires
13 mars 2010 à 9:41
Journée mondiale contre la cyber-censure | 12.03.2010 « i am a malagasy in genève
Marina ireo voalazanao ireo ry Tomavana satria dia mbola betsaka ny elanelana misy eo amin’ny mponina raha ny resaka aterineto sy ny teknolojian’ny fifandraisana ary ny fifandraisan-fdavitra no asiana resaka.
Mbola tsy takatry ny maro an’isa ny solosaina sy ny finday ahafana mampiasa ny « Net » ary tsy ampy ny ho enti-manan’ny tsirairay hidirana matetika eny amin’ireny « cyber-café » ireny.
Ny JIRAMA aloha dia olana tsy ho vahana mihitsy angamba raha tsy izany mety mba efa nivaha efa ela ihany izy io raha tena notadiavana vaha-olana maika.
Raha ny fahalalana aloha ho an’izay afaka mampiasa ny Aterineto aty an-tanindrazana dia azo lazaina fa misy raha oharina amin’ny firenena hafa raha tsy hilaza afa-tsy izay misy any Sina. Tokony ho faly amin’izany ihany ireo mpampiasa na dia mbola vitsy ihany aza satria tsy araka izay voalaza hoe iharan’ny jadona raha oharina amin’izay mitranga anay amin’ny firenena mampihatra izany.
Tena misy ho eritreretina mihintsy izany teninao izany fa misaotra betsaka nizara.